Kubhekwe intuthuko yangampela koHulumeni Basemakhaya - Bayede News
Okhethweni lwangoMfumfu imihlahlandlela yamaqembu bekufanele ikhulume ngezinkinga ezibhekene nezigceme
Ngonyaka we-1996 ilapho saqala khona ukuvotela oHulumeni Basemakhaya abaholwa ngamakhansela. Uma ngibheka manje sekuphele iminyaka engamashumi amabili nanhlanu saqala ukuvotela oHulumeni Basemakhaya kodwa kuze kube manje izwe alithuthuki.
Uma ngithi izwe alithuthuki ngikhuluma ngibhekise kungqalasizinda efana nemigwaqo yetiyela, imitapo yolwazi, imitholampilo ehlenga impilo yabantu futhi nemithi yokwelapha iziguli ikhona, abesifazane abazithwele abashaywa indiva beduve emabhentshini. Ngikhuluma ngezikole ezikhiqiza imiphumela emihle futhi enezifundo zesayensi nezibalo ebangeni leshumi nambili (umatikuletsheni). Ngikhuluma ngamanzi ahlanzekileyo futhi anganqamuki isinoma kanjani. Ngikhuluma ngezindlu ezisezingeni hhayi ezibuye zibe nemifantu esikhaleni ngenxa yokungakheki ngendlela efanele. Ngikhuluma ngeziteleka zezimfuno zomphakathi ezilokhu zivumbuke njalo njengamakhowe emuva kokuduma kwezulu. Ngikhuluma ngomasipala abangakwazi ukusebenzisa imali ngendlela efanele, labo masipala ngisho umcwaningimabhuku usekhale ngabo waze wadela kodwa isimo siyabhebhetheka kunokuthi sibe ngcono.
Njengoba sibheke okhethweni kulo nyaka ngiyacela ukuthi amalungu omphakathi uma eyovota avote ngokwazi ukuthi umuntu lowo amuvotelayo uzokwazi ukwenza umsebenzi. Iyangikhathaza kakhulu indaba yokuzwa amaqembu epolitiki ethi azokwakha indathane yamathuba emisebenzi, lokhu akusiwo umsebenzi kaHulumeni. Into okufanele yenziwe uHulumeni ukwakha ingqalasizinda, amabhange azobolekisa ngemali kosomabhizinisi abasaqala nakwasebesimeme ukuze bandise noma bathuthukise izindawo abasebenza kuzo, ilapho okudaleka khona amathuba emisebenzi. Umsebenzi kaHulumeni ukuqinisekisa ezokuphepha, ukuletha ezempilo, nokuhlinzeka ngezenhlalakahle ezweni. Nathi-ke kodwa ake siyeke ukuvotela umuntu ngokuthi udumile endaweni ngoba lezi zinkinga engizibalule ngenhla zidinga ubuholi obufundile, obukwazi ukuphatha imali kaHulumeni. Zidinga ubuholi obuqotho obuzokwazi ukwehlukanisa phakathi kweqembu noHulumeni.
Kumanje kuMasipala waseJohannesburg kuhlala njalo kunezinkinga ngohlelo lwezindlu bheka imijondolo eDiepsloot nesixakaxaka esise-Alexandra. Kanti nakuMasipala uMhlathuze kukhalwa ezimathonsi ngamareythi amba eqolo nokuke kwaholela esitelekeni samalungu omphakathi esavala thaqa ukusebenza kwezinto eMpangeni. UMasipala uMlalazi ikakhulukazi iWard 16 ihlezi ingenawo amanzi ngisho iziteleka ezinkulu esezike zenzeka zazezavala ngisho umgwaqo u-R66 kodwa kuyefana namanje akukakashintshi lutho. Lezi zinto azizintsha futhi ngiyazi ukuthi akusikho ukuthi abaholi abazazi. Izinkinga zamanzi, imigwaqo kanye nezempilo kumqoka kakhulu emakhaya njengoba sazi ukuthi kunezifo okuthiwa amahlalakhona ngaleyo ndlela ezempilo nemigwaqo kuklama indima enkulu ekwelashweni kwabantu.
Iziteleka akuyona into engingayikhuthaza ngoba azijwayele ukuthela izithelo ezizoqeda izinkinga unomphela kodwa iziteleka ziletha imishanguzo yesikhashana. Njengoba ukhetho loHulumeni Basekhaya lusondela usazobona amathilagi athwala amanzi ephuma ededelana emakhaya. Lo mkhuba wokwenza izinto isigubhukane kusuke sekuyindlela nje yokuzombuluza kwamaqembu emphakathini kwazise ukhetho luyawaphoqa ukuthi aphindele kubantu nokuyinto abangayikhonzile neze. Uma luke lwadlula ukhetho isambane siphindela emgodini waso, obehlupheka uphindela osizini lwakhe. UHulumeni kuyawusebenzela ukuhlupheka kwabantu ingakho ungasoze aluqeda usizi nenhlupheko egabhe aboHlanga. Ake sibheke ukuthi usizi nenhlupheko yaboHlanga kumsebenzela kanjani uHulumeni; umuntu ohluphekile wazi ukuthi kubongwa okuncane kubongwe okukhulu ingakho uHulumeni uma sekuzovotwa uvele ubanike izikibha nezijumbane zokudla. Lapho-ke abantu babonga cishe bawe phansi, onengane exoshiwe enyuvesi uyakhohlwa avuke ayovotela bona kanye laba baholi abangafuni ukuletha imfundo yamahhala ezikhungweni zemfundo ephakeme.
UHulumeni wazi kahle ukuthi imfundo iyakwazi ukulinganisa abantu abaphuma emakhaya angafani nokuthi umuntu ofundile nonemali angeke umnike isijumbane sokudla bese ekuvotela. Uma ungangikholwa uboke ubukisise kahle ukhetho lwemikhandlu yabafundi emanyuvesi, umuntu onenqwaba yezikibha akusiye ojwayele ukudla ubhedu okhethweni. Ingakho lingekho iqembu elikhankasa eBallito ngezijumbane zokudla ngoba bayazi ukuthi umuntu onemali nofundileyo akacabangi ngesisu. Ingakho-ke imfundo yamahhala ingasoze yaba seqhulwini kuHulumeni nakumalungu ePhalamende nje onke ngoba bayazi ukuthi ukwanda kwabantu abakwazi ukucabanga nokuhlaziya okujulile kusho ukuncipha kwezinsuku zabo embusweni. Kunalokho abaholi abathile baze baqhamuke namatemu okugcona aboHlanga kodwa abacabanga ngendlela ehlukile bathi o“Clever Blacks”. Ngaleyo ndlela uHulumeni noma yini oyenzayo uyenzela umuntu omnyama uyenza bese ushiya intuba yokuthi umuntu angazimeli ngokwanele. Ngibone isimanga mhla zili-15 kuMbasa wezi-2021 uMengameli wezwe uMnu uMatamela Ramaphosa ekhuluma eHammarsdale wavele watshela abantu ngendaba yama-R350. Lokhu kucacele ngisho ingane encane ukuthi ayikho into abeyazi ngelokishi laseMpumalanga nakuba ebeze ngenhloso yokukhankasela ukhetho lokuvala isikhala oselusemome.
Kulo nyaka bekufanele imihlahlandlela yamaqembu ikhulume ngezinkinga ezibhekene nesigceme ngasinye ukuze ikhansela likwazi ukubhekana nezinkinga zaleyo ndawo. Kunalokho uvele ubone izingqwembe ezifanayo yonke indawo ungafunga ukuthi kukhankaselwa ukhetho lukahulumeni wezifundazwe. Akufanele imikhankaso ifane ngoba izinkinga azifani ngaphandle-ke uma amaqembu azi ukuthi awakaze alungiselutho kuzozonke izigceme nezifunda.
Amafagugu esizwe: Kasikhumbuzane umlando sicabe imvomva
Njengomuntu owukhonzile umculo wesintu kunengoma kaPhuzekhemisi ethi “Amakhansela” nalapho khona umfo kaMnyandu ekhala ngokuthi angeke aphinde eyobavotela oHulumeni Basekhaya ngoba intuthuko akayiboni. Owabe enguNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal uMnu uLionel Mtshali yamdina kakhulu le ngoma ngoba wazama ngisho nokuthi ivalwe emsakazweni. Wayengasaqali njalo uMnyandu ngale ngoma ngoba kukhona enye ethi “Izwe Alithuthuki” ayikhipha ngowe-1997 nalapho ayekhala khona ngokuthi kwaboHlanga izwe alithuthuki kodwa kwabamhlophe lithuthuka nsuku zonke. Asethembe-ke kulokhu ukuthi angeke sisabakhona isidingo sokuthi kuze kuculwe ngezidingo zomphakathi ngoba abaholi sebeyazi ukuthi kudingeka imigwaqo kanye namanzi ezindaweni ezisemaphandleni. Asethembe nokuthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukusebenzela imiphakathi yabo ngaphandle kokushishibezwa ngeziteleka. Asethembe nokuthi uma sebehlezi emikhandlwini bephephethwa iziqandisi angeke bakhohlwe izidingo zabantu ababavotele ilanga likhipha umkhovu etsheni. Asethembe ukuthi uma sebegibela amabhanoyi anophephela emhlane angeke bakhohlwe imifula eyayibehlula besakhula ukuyiwela uma izulu linile futhi bazowakha amabhuloho ukuze izingane zanamuhla zingabe zisabhekana nensambatheka yokugcwala kwemifula.
Ake ngiphinde ngithathe leli thuba ngeluleke umphakathi wakithi ngobungozi bokucekela phansi izakhiwo zawo ngomlilo ngoba uzitshela ukuthi ngezikaHulumeni. Izinto ezikakhiwe ngesandla sikaHulumeni ngezethu, masingazicekeli phansi izakhiwo ezinjengezikole, imitholampilo, amabhilidi kamasipala ngomlilo ngoba lokho kufana nokuthi zisishaya thina ngendlebe etsheni. Uma umndeni ungaboni ngasolinye akekho umuntu ojika acekele ikhaya lakwabo ngomlilo. Ngiyakhuza nakulabo abasafuna ukuvela emphakathini ngenhloso yokugqama ngoba bezitshela ukuthi bazoqokwa ukuze bamele amaqembu okhethweni, ngithi nje musani ukufuna ukuvela kabi bese nihlohla imiphakathi ukuthi ivuke umbhejazana. Musani ukusukela abantu bezimoto nibavalele imigwaqo ngamatshe namathayi avuthayo ekubeni bengewona uHulumeni eniwuvotelile. Nani makhansela jwayelani ukuba inala kubantu abanivotelile, sebenzelani abantu ngeqiniso. Fundani makhansela ukubhula imililo isesemafusini ingaze ibhebhetheke kuhle kweyequbula. Hlalani ezindaweni enivotelwe kuzo, nihlale ngisho seninezimoto ezinkulu nemizi enezinjini ezikhanyisa ngisho kuhambe ugesi. Kujwayeleni makhansela ukubiza imihlangano yemiphakathi ukuze nikwazi nokubona uma sekukhona abanakhela ugibe ngaphakathi emaqenjini enu.
Nathi bahlali ngibona sengathi sesisondele isikhathi sokuthi ke sizibuze ukuthi njengoba sesivotele iqembu thizeni iminyaka ngeminyaka likwazile yini ukuxazulula izinkinga zethu njengomphakathi? Uma impendulo kungu‘Yebo!’, singaqhubeka nalelo qembu kodwa uma kuwukuthi impendulo ithi; ‘Cha!’, lokho kusho ukuthi mhlawumbe sekuyikhathi sokuguqula ukwenza ukuze kuthuthuke izindawo ezisemaphandleni.
nguMusa KMB Mpanza Apr 30, 2021